Ciidanka nabad-sugidda ee NISA oo fashiliyay miino lasoo dhigay goob aad u mashquul badan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka nabad-sugidda ee NISA oo fashiliyay miino lasoo dhigay goob aad u mashquul badan
Ciidanka nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa maanta ku guuleystay inay qaadaan Miino la sheegay in lasoo dhigay Afar Irdoodka suuqa X/weyne ee magaalada Muqdisho.
Ciidankaasi ayaa la sheegayaa inta aysan goobta ka qaadin miinada, ay gebi ahaan xireen goobta, iyagoona dadka u diidayay inay u dhawaadaan halka ay miinadu taallay, waxaana ugu dambeyn lagu guuleystay in miinadaasi goobta laga qaado kahor inta aysan qarxin.
Sidoo kale, ciidankaasi ayaa gacanta ku dhigay waxyaabo biro iyo qalab kale ah oo goobtaasi yaalay, iyagoo sheegay inuu ahaa qalab qarxa oo la doonayay in lagu qarxiyo dadka ku sugan suuqa X/weyne ee magaalada Muqdisho.
Suuqa X/weyne ayaa ka mid ah suuqyada ugu mashquulka badan ee ku yaalla magaalada Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan qaraxyada ay fashilaan ciidanka nabad-sugidda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ah mid aad u yar marka loo eego falalka qaraxyada iyo khaarijinta ay dagaalyahanada Al-shabaab ka geystaan magaalada Muqdisho.